bhimphoto: बाघ जुँघे
भीडहरुमा फरक लाग्ने ती मान्छे । नजिक गएर दुइ स्न्याप खिचेपछि उनले सोधे - भाइ पत्रकार हो ? हो भन्ने जवाफमा उनले भने - अलि टिवी विभीमा आउने गरि खिच्नोस । म मुस्कुराए । उनले टोपी फुकाले । अनि अलि सजिलोसँग उनको स्टुडियो पोज लिइयो ।
०६५ कात्तिक ९ गते शनिवार । हाटखोलामा कांग्रेसले गरेको आमसभामा मैले जुँघे मान्छेको फोटो लिँदाका बेला बताएको हु । तीन वर्षदेखि विराटनगर-१८ को नयाँ बस्तीमा घर बनाएर परिवारलाइ नेपालमा थान्को लगाएका उनको नाम हरिबहादुर क्षेत्री रहेछ । ४० वर्षका रहेछन । जुघा पालेको पाच वर्ष भएछ ।
१५ वर्षदेखि कोलकाताको टाटिया कन्स्ट्रक्शन नामक ठेकेदार कम्पनीमा सुरक्षागार्ड काम गर्दै आएको बताएका उनले भने - बुझनुभो भाइ । मेरो जुँघालाइ कम्पनीले महिनाको पाँच सय भत्ता दिन्छ । इण्डियाको पत्रिका, च्यानलहरुले पनि खबर बनाएको छ ।
सभा सुरु हुनै लागेको बेला थियो । मैले भीडमा उनीसग बढि कुरा गरिरहन मिलेन । छुट्टीमा घर आएका उनी भाषण सुन्न त्यहाँ आएका रहेछन । 'मेरो ३५ वर्षमै कपाल र दाह्री फुल्न थालेको छ , अनि तपाइको किन नफुलेको ? , निख्खर काला कपाल र दाह्री देखेर मैले उनलाई सोधें - तपाइले कलर लगाउनु हुन्छ जस्तो छ ।
उनको जवाफ थियो -फुल्न थालेको छ दाह्री अलिअलि । हेर्नुस मेरो चुल (कपाल) फुलेको छ र , छैन नि ।' उनी मज्जाले हाँसे । अनि भने 'घ्यू दल्छु भाइ जुँघामा घ्यू ।'
क्या मज्जा सोख थरि थरिका छन् । जेहोस बाघजुँघे भेटदा रमाइलो लाग्यो । म प्राय साथीहरुलाइ भन्छु । र, आफु पनि सतर्क हुन्छु । तस्बिर लिँदा त्यो विषयले क्यामराको उपस्थिति थाहा नपाओस । अनि नेचुरल खिच्न सकियोस । कांग्रेसका सभामा खिचिएका भिडका तस्बिरहरुमध्ये यिनै जुँघेको फोटो जानी जानी खिचियो । सुरुमा दुइ स्न्याप भनिएन । तर, पनि स्टुडियोमा खिचेजस्तै गरि खिचियो । मन खल्लो छ यी सट हेरेर । अनि रमाइलो पनि लागेको छ । यस्ता पनि मान्छे छन । रहर छ । जीवन छ । अनि जुँघा छ ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 8:03 PM